Ahoana ny fanesorana ny jailbreak amin'ny Cydia Impactor | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra manjo ny mpamaky fonja dia ny fahaverezan'ny jailbreak sarobidy. Ahoana no hitrangan'izany? Eny, manana olana goavana, na avy amin'ny jailbreak na tsia ary tsy maintsy averina amin'ny laoniny. Raha mamerina amin'ny laoniny ny fitaovana isika dia ny azo inoana indrindra (nataoko tao amin'ny iOS 5.1.1 ary niasa ho ahy izany) dia ny mijanona eo amin'ny sisin-dàlana ary tsy afaka manomboka, noho izany dia mila mamerina amin'ny iTunes isika. Rehefa mamerina amin'ny laoniny, lojika dia miala ny jailbreak, fa Tsy mamela antsika hamerina amin'ny kinova tsy vita sonia i Apple, mamela antsika hamerina amin'ny endriny farany ihany. Raha tsy mora tohanan'ny jailbreak io dikanteny io dia very isika.
Fa efa lasa izay. Omaly Saurik dia namoaka fanovana, amin'ny beta amin'izao fotoana izao ary tsy misy afa-tsy amin'ny iOS 8.3 sy iOS 8.4 ihany dia hamela antsika hamerina amin'ny laoniny ny fitaovantsika amin'ny iPhone nefa tsy mila manavao izany. Midika izany fa, raha toa ka mora tohanan'ny jailbreak isika, dia hijanona ao anaty kinova mora tohina noho io jailbreak io ihany. Dingana tena tsotra izay hazavainay aminao aorian'ny fitsambikinana.
Zava-dehibe ny milaza an'izany Cydia Impactor dia mbola tsy mifanaraka amin'ny iPod generasi faha-XNUMX satria mbola tsy misy OTA ho an'ny fitaovana. Antenaina fa hifanaraka amin'ny ho avy izy io.
Ny voalohany, manao backup izahay avy amin'ny iPhone miaraka amin'ny iTunes.
Mampifandray ny fitaovantsika izahay ary mahazo antoka fa manana bateria 20% farafaharatsiny (zava-dehibe).
Mametraka izahay Cydia Impactor avy any Cydia.
Mihazakazaka Cydia Impactor izahay. Mba hanaovana izany, tsy maintsy mikasika ny sary masina eo amin'ny efijery an-trano isika, avy eo amin'izay lazainy hamafa ny angona rehetra sy ny fitaovana tsy mahomby, avy eo Delete All. Tsy mila mikasika na inona na inona isika raha tsy mahita ny efijery fandraisana.
Mampihetsika ny fitaovantsika toy ny fanaontsika mahazatra.
Ohatra, raha manao izany amin'ny iOS 8.4 isika dia hamerina amin'ny laoniny ilay fitaovana mamela azy io ao amin'ny iOS 8.4 tsy misy soritry ny jailbreak. Mila mamaky azy io fotsiny isika ary manomboka amin'ny zava-drehetra madio.
Etsy ambany no ahitanao ny horonantsary nataon'i Jeff Bengamin:
Ka fantatrao izao. Ankehitriny ianao dia afaka manadino momba ny iLex Rat na Semi-restore. Tsy misy isalasalana fa ny tolo-kevitr'i Saurik no ho tsara indrindra amin'ny rehetra ary "Tokony hanana" ho an'ireo mpamaky fonja mendrika ny sira.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Ahoana ny fanesorana ny jailbreak amin'ny Cydia Impactor
Nomeko ny fisalasalako io, ary niasa tsara izany, hatreto tsy nisy zavatra tsy nataoko taloha tamin'ny ilexrat na tamin'ny semirestore, avy eo rehefa nanomboka ny efijery aho dia tsy teo i cydia, ary hoy aho satria indraindray nitranga tamiko ity tamin'ny ilexrat ary semirestore, tsy niseho i cydia, toy izao dia mbola tsy nino aho fa azo esorina ilay jalbreak, fa avy eo nanao famerenana amin'ny laoniny avy eo amin'ny sehatry ny rafitra aho ary RAHA MITSIPIKA IZAO, MBOLA TSY MISY NY JAILBREALK ARY AZONAO ATAO INDRAY TSY MISY TSY METY , tsy maintsy efa nisy ela io, ka tsy mila manavao ianao rehefa mahita olana.
Alberto Cordoba Carmona dia hoy izy:
Mahagaga! Izany no ilainay nandritra ny fotoana ela. Misaotra Saurik! Raha tsy misy azy dia zavatra maro no tsy ho tanteraka dieny izao. LEHIBE
Mamaly an'i Alberto Córdoba Carmona